ချောအိမာန် (မန္တလေး): December 2010
တစ်ကယ်ပါဘဲ သုံးနှစ်ဆိုတာ အချိန်ကာလတစ်ခု အောက်မှာ ပြောင်းလဲခြင်း နိယာမရေ……ပြတင်း အပြင်က ပါးလျတဲ့ ဆောင်းနှင်းငွေ့က အပင်တွေအောက်မှာဆိုင်း ဖွဲ့သီလို့ .. သစ်ရွက်တွေက ဒေါသသံနဲ့ ဆူညံပေါက်ကွဲ…ရှည်လျားလွန်းလှတဲ့ မနက်ဖြန်ဆိုတဲ့ နေ့များစွာဟာ အခုတော့ ချုံ့ယူဝါးစားထားပြီ……..ကျွန်တော့်ရဲ့ အငမ်းမရခုတ်ယူစားသုံးခဲ့တဲ့ နေ့ရက်တစ်ချို့ရဲ့ ကျန်စာများလား… ယခင်ညို့အားပြင်း စက်ကွင်းနှစ်ခု ကင်းလွတ်သွားပြီး ရောင်စုံဘောလုံးတစ်လုံးလို အဝေးကို လိမ့်ချင်တိုင်း လိမ့်နေခဲ့……..နွယ်ရဲ့ ချိရှရှ အသံလေး မောင်ကြားချင်တယ်…အိပ်ရာထက်က နွယ်ခန္ဓာကိုယ်လေးက သတိထားမိတဲ့အချိန်မှာ တစ်ကယ်ကို ပါးလျနေခဲ့ပြီ.. အိပ်ရာဘေးမှာ မှန်ပြောင်းလေးတစ်လက်… ဒီမှန်ပြောင်းလေးက ကျွန်တော် ဘန်ကောက်က ပြန်လာတုန်းက နွယ့်ကို ဝယ်ပေးခဲ့တာ … နွယ်က မှန်ပြောင်းလေး တစ်လက်နဲ့ ကြယ်တွေကို ကြည့်ရတာ သဘောကျသူ……။နေ့ညများစွာ မှန်ပြောင်းတစ်လက်နဲ့ အတူနေထိုင်ခြင်းဟာ ကြယ်ပွင့်များနဲ့ အိမ်ထောင်ကျနေခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ ပြောတဲ့ နွယ်အသံကို ပြန်ကြားနေမိတယ်…``မောင် နွယ်ဟာ တစ်ကယ်တော့ ကြယ်ပွင့်လေးတွေရဲ့ အိပ်ရှင်မဖြစ်နေတာပါ``ဟုတ်တယ် နွယ်ဟာ မောင်မရှိတဲ့ အချိန်မှာ မှန်ပြောင်းတစ်လက်နဲ့ ကြယ်တွေကို နေ့စဉ်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ ``နွယ်ဟာ မောင့်ရဲ့ ချစ်ခြင်းတွေနဲ့ တုတ်နှောင်ခံထားရသူပါ။ နွယ်ချစ်တဲ့ အချစ်တွေက မောင့်အပေါ် မလုံလောက်ခဲ့ဘူးလား ဟင်``နွယ်ရဲ့ ရှုင်အုံဟာ အားယူပြီး ပြောချင်လွန်းတာကြောင့် တသိမ့်သိမ့် နိမ့်ချည်၊ မြင့်ချည် …… အပေါ်ကြယ်သီးလေး ပြုတ်နေတာမို့ ဝင်းဝါနေတဲ့ ရင်သားမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ ကြယ်သီးကို တက်ပေးလိုက်တယ်….ကျွန်တော့်မျာက်နှာကို နွယ်မျက်နှာနဲ့ အနီးကပ်ဆုံးထားလိုက်ပြီး နွယ်နဖူးကိုညင်ညင်သာသာနမ်းရင်း ကျွန်တော့်ရင်တွေ စို့နစ်လာတယ်….``မဟုတ်ဘူး နွယ်… မဟုတ်ဘူး.. မောင်နွယ်ကို သိပ်ချစ်တယ်… မောင်နွယ်ကို တမ်းတဆဲပါ မက်မောဆဲပါ.. ဘာမှ မစဉ်းစားပါနဲ့ နွယ်``…``မောင့်ကို နွယ်သိပ်ချစ်ပါတယ်.. နွယ်တို့ မိသားစုအတွက် အရာအားလုံးထက် .. အဟွတ်… အဟွတ်… ````နွယ်``နွယ်ရဲ့ လေသံတိုးတိုးလေးကို မနည်းနားထောင်ရင်း ကျွန်တော် ဇနီးသည်နွယ်ရဲ့ မျက်နှာလေးကို ကျွန်တော် လက်နှက်ဖက်နဲ့ မယူရင်း…``မောင် နွယ့်အပေါ်မှာ မပြောင်းလဲဘူး အချစ်မလျော့ဘူး မောင့်ကို ခွင့်မလွှတ်ပါနဲ့… ဘယ်တော့မှ ခွင့်မလွှတ်ပါနဲ့ကွာ…``ကျွန်တော် ပြောရင်း ဝမ်းနည်းလာတယ်.. ပြီး နွယ်ရင်ခွင်မှာ မျက်နှာအပ်ရင်း မျက်ရည်တစ်ချို့ နွယ် လည်ပင်းထက်ဆီ…``မောင် ခေါင်းမော့ပါ.. မငိုပါနဲ့ကွယ်… အဖြေမရှိတဲ့ ချောင်ထဲမှာ ပိတ်မိခံရတဲ့ဘဝမှ မဟုတ်တာ.. အဲဒီလိုဘဝထဲမှာ နွယ်နဲ့ မောင့်ကို ဘုရားက အကြာကြီး ထားမယ်မထင်ပါဘူး။ နွယ်သိတာတော့ သံယောဇဉ် ၊ ချစ်ခြင်း ၊ နွေးထွေးနာလည်တက်ခြင်း ဆိုတာ တွေ ကင်းမဲ့သွားရင် ရင်ထဲမှာ ရာသီမရွေး အက်ကွဲ ခြောက်သွေ့နေမယ်.. အခု.. ခု.. အဲဒါတွေကို ကျော်ဖြတ်ပြီးပြီ မဟုတ်လား မောင်ရယ်.. မောင်နဲ့ နွယ်ကြားမှာ တစ်စိမ်းဆန်တဲ့ ခွင့်လွှတ်ခြင်း၊ မလွှတ်ခြင်းတွေ မရှိပါဘူး…````ဟုတ်ပါတယ်.. နွယ် ဒါပေမဲ့…``ကျွန်တော် ဘယ်လောက်ကြာကြာ ထိ `သဇင်ခိုင်နွယ်` ဆိုတဲ့ ကျွန်တော့်မိန်းမနဲ့ အတူတူရှိနေနိုင်မလဲ..`` နွယ် တစ်ကယ့်ကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ပြောနေတာလားဟင်``နွယ်က မျက်လုံးလေးကို မှိတ်.. ခေါင်းလေးကို ငြိမ့်တယ်။ကြေကွဲဝမ်းနည်းမှု့ အပူမီးတွေကို အေးချမ်းတဲ့ စမ်းရေ အိုင်လေးထဲမှာ ငြိမ်းသက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရတဲ့ … အချိန်ပါးပါးလေးမှာ… ပိုမို ရှည်လျားလေးလံတဲ့ ဖိစီးမှုတွေက ကိုင်းညွတ်အိကျနေပြီ…အဲဒီည.. ကနွယ့်ခန္ဓာကိုယ်လေးကို ကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးဖက်ထားပြီး အိပ်ခဲ့တယ်…ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲက နွယ့်ခေါင်းပေါ်က ဆံဆ.. ကျွန်တော်ချစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ နွယ့်နှုတ်ခမ်း၊ဖြောင့်စင်းစင်း နွယ့်နှာတံ၊ ရှည်ရှည်သွယ်သွယ်လက်တောင်းတံလေး ၊ လက်ချောင်းလေးတွေ လက်သကြွယ်မှာ ခပ်ချောင်ချောင်နဲ့ လည်ထွက်နေတဲ့ မင်္ဂလာလက်စွပ်၊ နွယ်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အလှဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ခါးသေးသေးလေး ခုတော့ ပိုသေးလို့ နေခဲ့ပြီ.. ..``ကျွန်တော်မအိပ်ဖြစ်ပါ.. တစ်ချက်တစ်ချက် နွယ်ညည်းသံလေး… နွယ် ကျွန်တော့်ရင်ခွင်မှာ စိတ်ချ၊ လက်ချ အိပ်ပျော်သွားတယ်လို့တော့ ထင်တယ်.. နာရီသံတစ်ချက်ချက်က စက္ကန့်နဲ့အမျှ ညဉ့်ယံ အမှောင်ထုကို ပေါက်ထွက်…နွယ်ရဲ့ ဝမ်းခေါင်း အပိန်၊ အဖေါင်း၊ အသက်ရှုသံမျှင်းမျှင်း…မိုးရေလို အေးမြခြင်းမရှိတဲ့ မျက်ရည်စက်…သေချာပြီ အပြင်မှာ မိုးရွာနေခဲ့ပြီ..မိုးရေစက် တို့က သည်းသည်း မည်းမည်း..ကျွန်တော်ရင်ထဲက မီးတောက်တစ်ညွန့်ကိုတော့ ကောင်းကင်ကြီးလဲသိ မိုးရေစက်လည်းမသိ… နောက်ပြီး ``အိမ်`` လဲ သိလိမ့်မည်မဟုတ်….``
အရာရာကို လိုချင်စိတ်နဲ့ ကြည့်တဲ့မျက်ဝန်းကို မုန်းတယ်..ဒါကြောင့် ကျွန်တော့ကို ကျွန်တော် မုန်းတယ်..အလျံညီးညီး ပတ္တမြား အသွေးရောင်အောက်မှာ တောက်လောင်နေခဲ့တာ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အသားလုံးလုံးပင် မရှိတော့ လောက်အောင်ဘဲ….နွယ်တစ်ယောက်ကိုဘဲ တစ်သက်လုံး ချစ်ခင်စွဲလန်းနေလိမ့်မယ်လို့… ထင်တာ မဟုတ်ပါဘူး.. အမှန်တကယ်ပါ.. နွယ်တစ်ဦးသားဘဲ ဘဝရဲ့ အချစ် လက်တွဲဖော်အဖြစ် အခြားတစ်စုံတစ်ဦးပေါ်မှ သက်ရောက်ခြင်းမရှိဘဲ လက်ထပ်ဖြစ်ခဲကြတာဘဲ…နွယ်ရော ကျွန်တော်ရော တည်ကြည်ငြိမ်သက်တဲ့ ခံစားချက်အဖြစ် နှစ်သက်စွာပြောင်းလဲခဲ့ကြတယ်…နွယ်က နံမည်လေးအတိုင်းဘဲ မဟာဆန်တယ်.. နွယ်က လက်ထပ်လိုက်တာကို ဘာနဲ့ တူသလဲလို့ ကျွန်တော့်ကို မေးတော့… ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြေရင်ကောင်းမလဲ စဉ်စားခဲ့တယ်.. ဒါက နွယ့်ကို တန်ဖိုးထားလို့ ၊ လေးစားလို့ ဘဲ…``ဘဝတစ်ခုကို တည်ဆောက်ဖို့ အစပြုလိုက်တာလေ… အနာဂါတ်အတွက် လျှောက်လှမ်းရမဲ့လမ်းစကို မောင်တို့ နှစ်ဦးအတူတူ ဆိုးတူကောင်းဖက် ကျော်ဖြတ်ပါ့မယ်လို့ လူအများရှေ့မှာ ကတိသစ္စာပြုလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နွယ် … မဟုတ်ဘူးလား…````မငြင်းပါဘူးမောင်… နွယ်ပြောမယ် နွယ်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စကားတော့ မဟုတ်ပါဘူး… လက်ထပ်တာဟာ ဘာနဲ့ တူသလဲ ဆိုရင်… မုန်တိုင်းထန်တဲ့ပင်လယ်ပြင်မှာ လှေရွက်ကြီးကို နှစ်ဆလောက်ဖြန့်ကားလာအောင်ဖြန့်လိုက်တာနဲ့ တူတယ်.. အဲဒီလို ဖြန့်လိုက်တာနဲ့ လူလောက မုန်တိုင်းတွေထဲမှာ ဒီရွက်ဟာ ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ် လိမ်ထားတာ ထက်ပိုပြီး အန္တရယ်များလာတော့တာပဲလို့ ပြောတယ်.. ````ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ် နွယ် ဒါပေမဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ဘဝတွေကနေ လက်တွေ့ဘဝထဲ ခုန်ဆင်းပြီး အဆုံးသတ်လိုက်တာတော့ မဟုတ်ဘူးနော်.. ရည်းစားဘဝက ချိန်းတွေ့ကြတဲ့ ရင်ခုန်မှု စွန့်စားမှု့ တွေကို စွန့်လွှတ်လိုက်ကြတာတော့ နှမြောစရာပဲနော်… ``ကျွန်တော့်စကားကြောင့် နွယ်က အသံတိုးတိုးနဲ့ ရယ်တယ်…ကျွန်တော်နဲ့ နွယ်ဟာ ဘယ်လို ပြဿနာမျိုးဘဲဖြစ်ဖြစ် ရယ်မောမေ့ပျောက် နိုင်တဲ့ သဘောထားမျိုးတွေရှိခဲ့ကြလို့ ကိုယ့်အကြိုက်တွေ စွန့်လွှတ်ရတာကို အလွယ်တကူပါဘဲ.. ဒါတွေက ကိုယ်ချစ်တဲ့သူအတွက်လေ.. ကျွန်တော် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကို စွန့်လွတ်နိုင်သလို နွယ်က ကျွန်တော် မကြိုက်တဲ့ ကတိတွေကို တောင်းလေ့ မရှိသလုို ကျွန်တော် နွယ်မကြိုက်တဲ့ သံသယနဲ့ သဝန်တိုမှု့ မရှိဘူး။ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ကြားမှာ ကတိမလိုဘူးလို့ သတ်မှတ်ထားခဲ့တယ်…။ ``ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့တဲ့ အိမ်ထောင်တစ်ခု ဖြစ်ဖို့ ရုပ်ရည်ဆွဲဆောင်မှု့ ရှိရုံ၊ စိတ်သဘောဆွဲဆောင်မှု ရှိရုံနဲ့ မလုံလောက်ဘူး… နှစ်ဦးစလုံးမှာ လက်ထပ်ပေါင်းသင်းပြီးရင် သေတပန် ၊ သက်တစ်ဆုံး ပေါင်းသင်းဖို့ ရိုးသားတဲ့ ဆန္ဒဟာ ဒီဘဝတင်မဟုတ်ဘူး ဘဝပေါင်းများစွာအထိ`` ဒီလို ကျွန်တော် နွယ့်ကို ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်.. ရင်ထဲက လှိုက်လှိုက်လှလှဲပါ။အချစ်ရဲ့ ရမ္မက်ဆိုတာ စည်းဝိုင်းလေးအပြင်နဲ့ အထဲလို…ကျွန်တော်ဟာ အံ့သြဖွယ်ရာကောင်းတဲ့ ချိုမြိန် ဆန်းသစ်တဲ့ အရာတစ်ခုထပ်မံ တိုးလာခြင်းပါဘဲ….နွယ်အပေါ်မှာတော့ ကျွန်တော်မလျော့ခဲ့ပါ….ကျွန်တော် လမ်းတစ်လမ်းထဲ .. လောကမှာ ပြောလေ့ရှိတဲ့ ရုတ်တရက် အက်စီးဒင့်တွေဟာ မထင်မှတ်ဘဲ… ညွတ်တိမ်းမိပြီးတဲ့နောက်…..
``အိမ်`` ဆိုတဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ နုဖက်ဖက် အလှ…. ငွေစက္ကူ အထပ်လိုက်တွေ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ သူမဟာ ကျွန်တော့်လက်ထဲက ငွေတွေထက် ကျွန်တော့် နှလုံးသားကို တွယ်တာ လွန်းသူ …သူမ ဟာ မဖြားယောင် .. မဖြူဆွယ်ခဲ့ပါဘူး..ကျွန်တော် ဆေးလဲ မမိခဲ့ပါဘူး…ဖြူစင်နုနယ်တဲ့ သူမဘဝကို စာနာသနားစိတ်နဲ့ ကူညီခဲ့တာ.. ဒါကဘဲ ကျွန်တော့်ဘဝအတွက် ပိုးပင့်ကူမျှင်တွေ ယှက်သန်း အိမ်ဖွဲ့စေခဲ့တာလား..ပြန်လှည့်ထွက်ခဲ့တိုင်း အမှားတစ်ခုနဲ့ အတူ ယစ်မူးပျော်ပိုက်ခဲ့မိတာ…ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံး တောက်လောင်နေခဲ့တာကို ကျေနပ်နေခဲ့တယ်…``အိမ်`` ဆိုတဲ့ သူမရဲ့ အပေါ်ဆုံးထပ် တိုက်ခန်းကျဉ်းကျဉ်းလေး….သူမကို တွဲကူတက်ခဲ့ဖူးတဲ့ လှေကားတစ်အုတ်တိုက် ခပ်မှိန်မှိန် မီးရောင်အောက်မှာ.. ကျွန်တော် ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှန်း မသိတဲ့ စိတ်တွေနဲ့ … ရုတ်တရက် .. ရုတ်တရက်ပေါ့… အနမ်းမိုးတွေ.. ခြွေချစဉ်မှာလဲ… အပြင်မှာ မိုးတွေသဲသဲ မည်းမည်း ရွာနေခဲ့တယ်…. နောက်… သူမရဲ့ လက်တွေက ကျွန်တော့်လက်မောင်းတွေဆီအားကိုး .. မှီတွယ်လာတယ်… လှည့်ပြန်ထွက်လို့ရပေမဲ့…. စေခိုင်း အမိန့်ကျထားသလို ခြေလှမ်းတွေက ``အိမ်``ရဲ့ တိုက်ခန်းအိုလေးဆီသို့..အိမ်ဟာ ကျွန်တော့်ဆရာရဲ့ သမီးလေးပါ။ နောက်ပြီး နှလုံးရောဂါသည်လေး…ဆရာလည်း ပန်းနာရင်ကျပ်နဲ့ ဆေးရုံပေါ်မှာ ကျွန်တော်ရှေ့တင်ဘဲ ကွယ်လွန်ခဲ့…ဆရာ့သမီးလေး.. ဆရာသိပ်ချစ်တဲ့ ``အိမ်``ဟာ ခိုလှုံရာရင်ခွင် ငိုဖို့ ရင်ခွင် မရှိလေတော့ ကျွန်တော့်ကိုဘဲ.. ရင်ဖွင့် ငိုရှုက်ရင်း သူ့ရောဂါကို ကျားကန် အံတုနေဆဲ..ကျွန်တော် အိမ် ကို တက်နိုင်သလောက် ကူညီခဲ့တယ်.. ဖြည်းဆည်းခဲ့တယ်… တစ်စစ အိမ်ရဲ့ ကျွန်တော့် အပေါ်တွယ်တာလွန်းမှု့ ဂရုစိုက်မှု၊ ကြင်နာမှု၊ အရာအားလုံးတို့ဟာ.. နွေးနွေး ထွေးထွေး နဲ့ ရောင်ပြန်ဟတ်ခဲ့ကြ….ကျွန်တော်ရှောင်တိမ်းဖို့စဉ်းစားတိုင်း ခြေလှမ်းတွေက ကန်ချက်ပြင်းပြင်းနဲ့ ကန်လိုက်တဲ့ ဘောလုံးတစ်လုံးလို အိမ် ရှိတဲ့ .. အိမ်လေး.. ဆီဘဲ…ကျွန်တော့်မှာ ခိုင်မာတဲ့ မိသားစုရှိတယ်.. အိမ် သိတယ်.. ချစ်တဲ့ ဇနီးနဲ့ သားလေးရှိတယ်… အိမ် သိတယ်…ကျွန်တော်တို့ ဘာကို မသိခဲ့ကြတာလဲ..``အိမ်``က ကျွန်တော့်ကို ကို လို့ ခေါ်တယ်..အိမ်ပြောပြောနေတဲ့စကား…``အရွယ်မတိုင်ခင် မအိုချင်ဘူး ကို… အဲဒီလိုဘဲ အရွယ်မတိုင်ခင် မသေချင်ဘူး…`````အချစ်ဆိုတာ အချစ်နဲ့ စတယ်… အနက်ရှိုင်းဆုံး အစစ်မှန်ဆုံး အချစ်တွေဟာ အမြဲလိုလိုရုတ်တရက် ပေါက်ဖွားလာတယ်တဲ့… ဟုတ်လား … ကို ````အင်း …. ဟုတ်တာပေါ့````ကို့ ကို ဘယ်လိမှန်းမသိဘူး အိမ်ချစ်တယ်… ရုတ်တရက် ကိုချစ်သွားတယ်.. အိမ်ကိုရော````အတူတူဘဲပေါ့ `အိမ်` ကိုယ့်အတွက်ကလဲ မထင်မှတ်ဘဲ ရုတ်တရက်တွေပါဘဲ``ကျွန်တော် အဲဒီလို ဖြေခဲ့တယ်..``ခုလို အချိန်တွေမှာ အိမ်နားမှာ ရှိနေပေးတဲ့ ကို့ကို ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ… ကို့ရဲ့ဇနီးက အရမ်းချစ်မှာဘဲနော်… ကိုက သဘောထား ပြည့်ဝတယ်.. စိတ်ထားကောင်းတယ်.. ကို့ကို အိမ်လေးစားတယ်.. ဘာဖြစ်လို့လဲ သိလားကို… . အိမ်.. အပေါ်မှာ လိုအပ်တာထက်မပို… အခွင့်အရေးရလျှက်သားနဲ့ ကို စောင့်ထိန်းခဲ့တဲ့ကျင့်ဝတ်ကို အိမ် လက်ခံမိတိုင်း ကို့ကို သံယောဇဉ် ပိုလေပါဘဲ… ``ကျွန်တော် ဖျားချင်နေပြီ… `အိမ်` ရင်ထဲက ဒီစကားတွေကြားရတာ.. ကျွန်တော့်ရဲ့ စပ်ဖျင်းဖျင်း ဖြစ်နေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ချုပ်တီးမှု.. ၊ ပေါက်ကွဲမတက် စိတ်တွေ…ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက် `အိမ်` အခန်းလေးထဲမှာ ကော်ဖီသောက်ခဲ့ကြ၊ စာအုပ်တွေဖတ်ကြ၊ အိမ်ချက်တဲ့ ထမင်းအတူစားခဲ့ကြ၊ `အိမ်` ရယ်သံ.. ရေချိုးပြီးစ အိမ် ထံက ဆပ်ပြာရနံ့၊ ဆံနွယ်တွေက ရှန်ပူရနံ့၊ ခန္ဓာကိုယ်ရနံ့ ခပ်သင်းသင်းလေး၊ ကိုယ်တိုင်ခြောက်သွေ့အောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ဆံဆတွေ၊ ကြားမှာ ကျွန်တော် ဘယ်အထိများ အိပ်မောကျနိုင်ခဲ့မှာလဲ…ကျွန်တော့်ရဲ့ နောက်ထပ် အချစ်တစ်ခုဟာ ရုတ်တရက်… ကျွန်တော့်ကြောင့် `အိမ်` လန်းဆန်းလာသလို .. ဆေးခန်းပုံမှန်ပြသနေရတဲ့ နာတာရှည်လူမမာလေး.. ဘဝက လွတ်မြောက်ရတာကို ကျေနပ်ခဲ့တယ်…ဆရာဟာ ကျွန်တော်များ အိမ်ထောင်မရှိခဲ့ရင်.. အိမ်နဲ့ လက်ထပ်ပေးမှာအသေအချာ……
အိမ်က နေလဲကောင်းလာတော့ ခရီးလေး တစ်ခုကို သွားဖို့ ပူစာတယ်..ကျွန်တော် လိုက်ပို့ချင်ပါတယ်.. အားရက်တစ်ချို့ကိုဖဲ့ပြီး ရှမ်းပြည်ဘက်သွားဖို့ စီစဉ်ခဲ့တယ်… နွယ်ကတော့ သိပ်မသွားစေချင်.. အလုပ်အကြောင်းပြလိုက်တယ်..``မောင်.. အဲဒီခရီးကို မသွားပါနဲ့လား````မောင့်အလုပ်က မသွားလို့ မရဘူးလေ.. နွယ်က ဘာလို့ မောင့်ကို မသွားစေချင်တာလဲ````ဟင့်အင်.. သွားမှဖြစ်မှာဆိုလဲ သွားပါ..``နွယ်ရဲ့ စကားထက်.. ဆက်ဆက်သွားမယ်နော်.. ဆိုတဲ့ `အိမ်`စကားက ပိုခိုင်ခန့်နေတယ်…နွယ်စကားလုံးတွေ ခပ်ပါးပါး ဖြစ်နေသလို … နွယ့် ခန္ဓာကိုယ်လေး ခပ်ပါးပါး ဖြစ်နေတာကို.. ကျွန်တော် သတိမထားခဲ့.....ဆယ်ရက်တာခရီးမှာ ကျွန်တော် အိမ် ကျန်းမာရေးကို အဓိက ဦးစားပေး ဂရုစိုက်ခဲ့တယ်.. ဒီခရီးကို ထွက်ပေးတာကလဲ.. သူ့ ကျန်းမာရေး ပိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ပေးခဲ့တာ… ဘာမှလိုအပ်တာမရှိစေရ.. အိမ် စိတ်ကြိုက် ဖန်တီးပေးခဲ့တယ်.. အရင်က သေစကားနဲ့ အားငယ်အရှုံးပေးတဲ့စကားတွေကို ကျွန်တော် လက်မခံခဲ့ဘူး..။ ဘဝအတွက် အားဖြစ်စေမဲ့ စာအုပ်တွေ ဖတ်ပြခဲ့တယ်.. နေ့ရက်အသစ်တွေကို ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းဖို့ အားတွေ စိတ်ဓာတ်တွေ မြှင့်တင်ပေးခဲ့တယ်.. တောင်ပေါ်အလှတွေနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေရိုက် ပေးခဲ့တယ်..။ `အိမ်` ပျော်သလောက်နေခဲ့တယ်…။ကျွန်တော် နွယ့်ဆီကို ရှမ်းပြည်ရောက်ပြီဆိုတာ ဖုန်းတစ်ခါဘဲ ဆက်ဖြစ်ခဲ့တယ်..။ ကျွန်တော့် နွယ့်ကို အရာရာ စိတ်ချနေခဲ့တယ်… ။မပြည့်စုံခြင်းနဲ့ မကျန်းမာခြင်း ဆိုတဲ့မည်းမှောင်တဲ့ ဒုက္ခနှစ်ခုကို ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ `အိမ်` ကို သနားခဲ့တယ်.. ဘယ်လောက်ဘဲ ဒုက္ခတွေ့တွေ့တည်ငြိမ်စွာ ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ သတ္တိရှိဖို့ ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်.. နားသွင်းပေးတယ်…အိမ် ဟာ တစ်ကယ့်ကို ပေါ့ပါးလန်းဆန်းလာတယ်.. ရည်ရွယ် ချက်ရှိလာတယ်.. ဒါဟာ အလွန်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာတွေဘဲ .. အရာရာ စိုးရိမ်လွန်းခဲ့တဲ့ အိမ်ရဲ့ ဝေဒနာ တော်တော်သက်သာ သွားခဲ့တယ်…။ ကျွန်တော်ပြန်လာတော့ ထင်မှတ်မထားတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေက အင်တိုက်အားတိုက်ကြိုဆိုလို့.. နွယ် .. ကျွန်တော့်ရဲ့ နွယ်ဟာ.. အခန်းထဲက ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်…နွယ်ဟာ.. မျိုသိပ် ခဲ့ရတာ တွေများလွန်းလို့၊ အံကြိတ်ခံရတာတွေများလွန်းလို့ ၊ နှုတ်ခမ်းလေးတွေပင် သွေးစို့နေပြီလား.. နွယ်ဘာဖြစ်လဲ.. ကျွန်တော်မသိ .. ဆရာဝန်နဲ့ သားရဲ့စကားမှာ ကျွန်တော် ခြောက်ခြားတုံလှုပ်သွားတယ်…ဖြစ်ရလေ.. နွယ်ရယ်….ကြောက်စရာ ကောင်းတဲ့ ကင်ဆာဆဲလ်.. တွေက နွယ်ကိုယ် အနှံ့မှာ ပျံ့နေပြီတဲ့.. ``ဖေဖေ .. မေမေ အရမ်းငိုတယ်.. အရမ်းနာတယ်ထင်တယ်.. မေမေ သေသွားမှာလားဟင်.. ဖေဖေ မရှိတုန်း.. မေမေ မိုးရွာထဲက ပြန်လာတယ်.. ငိုတယ်.. မေမေရောဂါရှိတာ.. ဖေဖေကို အသိမပေးဖို့ ဆရာဝန်ကို တောင်းပန်ပြောခဲ့တယ်..တဲ့။ဇနီးသည်ရဲ့ အထီးကျန်နေ့ရက်၊ ရောဂါနဲ့ ခြောက်ခြားဖွယ် ဖြတ်သန်းနေရစဉ်မှာ …ကျွန်တော်ကတော့….ခရီး မသွားစေချင်တာ.. ဒါကြောင့်လား… နွယ်… ရုတ်တရက်ဆိုတဲ့ စကားကို မောင်သိပ်ကြောက်နေပြီ.. နွယ်.. မောင်ပြန်လာတော့ နွယ်ကိစ္စကို ရုတ်တရက် သိလိုက်၇တာပါဘဲ… ပိုဆိုးတာက မောင့်ရဲ့ မမျှတမှု့၊ ဥပေက္ခာပြုသလို… နွယ်အပေါ်တာဝန်မကျေမှု့ တွေက မောင်ရင်ကို မီးစနဲ့ထိုးနေခဲ့ပြီ..။ နွယ်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်၊ မျက်နှာပြောင်းလဲမှု့လေးတွေကို သတိတစ်ချက်လေးရှိခဲ့ပေမဲ့ သာမန်လေးလို့ ထင်ခဲ့မိတယ်.. မောင်ဟာ လူတိုင်းအပေါ် ကောင်းချင်ခဲ့ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ အနီးဆုံး ဖြစ်တဲ့ နွယ့်အပေါ်မှာ…နွယ်.. အချိန်တွေ ဘယ်လောက်များ.. ကျန်သေးလဲ.. နွယ်..မောင် အားတဲ့ရက် နွယ်တို့ မိသားစု ခရီးထွက်ရအောင်လို့ ပြောတာကို ထွက်တာပေါ့လို့ ပြောရင်း.. မောင်မစီစဉ်နိုင်ခဲ့ဘူး……။******နေရောင်တို့က မျက်နှာကျက်ဆီမှ တဆင့် မျက်နှာပေါ် ကျရောက်လာခဲ့ပြီ.. ကျွန်တော် မနက်ရောက်မှ တစ်ချက်လေးဘဲ အိပ်ပျော်သွားမိတယ်.. ထင်တယ်…။ ချက်ချင်းဘဲ နွယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ နီးနီးကပ်ကပ် ထိတွေ့နေမှု့က နွေးထွေးနေတယ်…နွယ်နဲ့ ကျွန်တော် မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖို့ ကျွန်တော်အားယူမိတယ်… ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲမှာ ကျောလေးပေးထားတဲ့ နွယ်က တစ်ဖက်ကို စောင်းအိပ်နေတယ်..စားပွဲတင်နာရီလေးကို အကြည့်.. ဆယ်နာရီထိုး………ဒါဆို နွယ် ဗိုက်ဆာနေရာပေါ့..ကျွန်တော် နွယ့်လက်လေးတွေကို အသာစမ်းကြည့်.. ခပ်.. နွေးနွေးလေးပေမဲ့… ကျွန်တော်နဲ့ ပခုံးချင်းယှဉ်နေတဲ့ နွယ့်ပခုံးလေး အနိမ့် အမြင့် အသက်ရှုသံ.. နွယ်ခြေချောင်းလေးတွေ….ဆံနွယ်.. နှုတ်ခမ်း.. မျက်လုံး.. ရှည်ကော့ကော့ မျက်တောင်…ဘာဆိုဘာမှ……ဟာ………အသက်ရှုရပ်သွားတော့မလောက် ကြောက့်လန့် တုံလှုပ်သွားတယ်…နွယ် မျာက်နှာလေး ကို တည့်လိုက်တယ်…နွယ်ဘာမှ မသိတော့ မျက်လုံးတွေ ဖြူ.. နှုတ်ခမ်းတွေ ဖြူနေပြီ.. နွယ့် အသွေးအသား.. အားလုံးဟာ ပကတိ အတိုင်းပေမဲ့ နွယ်ကတော့..ကျွန်တော့် ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံးရှိ အသွေးအသားတွေ စုတ်ယူခံလိုက်ရသလို ခံစားလိုက်ရတယ်…သားလေးက ငိုကြွေး…..ကျွန်တော့် ရင်ခွင်ထဲမှာ နွယ်ရှိတယ်… နွယ်အသက်ကို နှုတ်ယူသွားတာ.. မောင်လား.. နွယ်.. နွယ် မောင့်ကို စောင့်နေခဲ့တာလား…မောင် နွယ့်ကို သိပ်ချစ်တယ်…နွယ်ဟာ ရုတ်တရက် မောင့်ကို စွန့်ခွာသွားတာမဟုတ်ပါဘူး… နွယ် အရမ်းခံစားပြီးမှ နာနာကျင်ကျင်နဲ့ မောင့်ကို စွန့်ခွာသွားတာ… မဟုတ်လား…မောင်သစ္စာနဲ့ အနမ်းတစ်ခု ပေးအပ်ပါရစေ… နွယ်မြင်ရင်.. မောင့်ကို လှောင်ပြုံး ပြုံးမလား.. သစ္စာတွေနဲ့ဘဲ.. အထီးကျန်စွာ ဖြတ်သန်းရဦးမှာပေါ့…ကျွန်တော် နောက်ဆုံးအနေနဲ့ နွယ်ပါးပေါ် အနမ်းတစ်ခု ခြွေချခဲ့ပါတယ်… သစ္စာပြုတဲ့ အနမ်း… သစ္စာဖွဲ့ အနမ်း…တွေဘဲပေါ့…။
Perfect Magazine (October2010)ချောအိမာန်(မန္တလေး)13.9.2010